Soo wac @ + 91-993.702.7574 si aan u ogaano 15 25 Seater Tempo Travel Price in Bhubaneswar
Raadinta baaskiil la'aan bilaash ah oo aad u socotay, Bhubaneswar? Sanduuqa cows'ac Tempo Travel Price ee Bhubaneswar waa shaki ugu wanaagsan. Adeegga aad hesho waa kan ugu fiican magaalada. Kiraynta Tempo Traveler waa hab weyn oo aad ku safri karto haddii aad tahay safarka koox. ac Tempo Traveler waxay noqon kartaa gaadiidka ugu fiican ee safarka gaaban ama safar gaaban. Sanduuqa Ceelbuur 'waxay bixiyaan qiimaha ugu wanaagsan ee Tempo Travel Price ee Bhubaneswar. Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo Tempo Travel for kirada oo ay ka mid yihiin Tata Winger 15, 17, 19, 21. Kooxdayadu waxay kaa caawin doonaan inaad qorsheyso safar aad u fiican adiga oo aan wax dhibaato ah. Darawalkeenu waxay leeyihiin aqoon qoto dheer, hubinaya in safarkaagu uu si siman u socdo. Hubi Tempo Travel Price in Bhubaneshwar si aad u aragto adeegyadayada. Waxaan ku fekereynaa fikrado iyo dadaal badan oo ku saabsan qanacsanaanta macaamilka si ay u helaan safar raaxo leh oo nasasho leh.
Booqashada Odisha markii ugu horeysay? Mise leedahay maalin ka mid ah meelaha wax lagu daawado? Waa in aad shaqaaleysiiso 25 Seater Tempo Traveler haddii aad u socoto koox. Si aad u badan oo aad u aragto Odisha, shaqaaleysiinta Tempo Traveler waa habka ugu wanaagsan ee aad ku heli karto oo aad u aragto wax walba. U hubso nabadgelyadaada iyo raaxadaada inta lagu jiro safarka, maaddaama dhammaan baabuurta si fiican loo baaray ka hor inta aan kirada la bixin.
Adeegga Saacadaha saacadaha 24- Waxaan bixinnaa adeegga 24 saacadaha dhammaan macaamiisheena, iyadoon wax dib loo dhigin. Waxaan nahay mid ka mid ah Safarada ugu fiican ee Bhubaneswar, siinta adeegyo tayo leh macaamiisheena.
Tayada- Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa inaan u adeegno macaamiisheena si qancin leh. Dhamaan Tempos waa dhamaanteen xiddigaha 5. Waxaan nahay shirkadda kaliya ee rakaabka gaadiidka ee Hindiya oo leh abaalmarin adeeg heer sare ah oo macaamiisha ah iyada oo loo marayo Maareynta Tayada Yurub.
Tababaraha & Ammaanka Darawalka- Waxaan hubinney in darawalkayaga ay leeyihiin tababar iyo qiimeyn haboon ka hor inta adeegga macmiilka. Waxaan hubinaynaa in darawalkayaga ay leeyihiin tababarka koowaad ee gargaarka degdegga ah. Xiisad kasta waa la kormeeraa ka hor intaadan ka tegin dhismahayaga.